Usoro nhazi usoro ihe eji arụ ọrụ zuru ezu na iche iche bụ otu uru dị mkpa nke ụlọ ọrụ Henan Zheng Heavy. Ọ nwere ike inye ngwọta zuru ezu na ntụkwasị obi maka usoro usoro dabere na mkpa ndị ahịa.
Anyị nwere ahụmịhe na atụmatụ na ọrụ nke ahịrị mmepụta fatịlaịza dị iche iche. Ọ bụghị naanị na anyị na-elekwasị anya na usoro njikọ ọ bụla na usoro mmepụta, mana anyị na-aghọtakwa nkọwa nke usoro ọ bụla na usoro mmepụta niile wee rụpụta nke ọma.
A na-ejikarị emepụta ahịhịa granulator na-emepụta fatịlaịza. Organic fatịlaịza nwere ike nke anụ ụlọ na ọkụkọ nri, ugbo n'efu na ọchịchị siri ike n'efu. Ekwesiri ka emeghari ahihia ahihia ndia tupu emegharia ya na nri ndi ahia nke ahia. Ntinye ego nke ịtụgharị ihe mkpoba n'ime akụ bara uru.
Disc granulated organic fatịlaịza mmepụta akara adabara:
►Mmepụta nke fatịlaịza nsị organic
►Imepụta ezi nri fatịlaịza
►Mmepụta ọkụkọ na ọbọgwụ nri fatịlaịza
►Atụrụ fatịlaịza organic fatịlaịza n'ichepụta
►Organic fatịlaịza n'ichepụta nke mepere emepe sludge
1. nsị anụ: nri ọkụkọ, nri ezi, nri atụrụ, nsị ehi, nsị ịnyịnya, nri oke bekee, wdg.
2. ulo oru mkpofu: nkpuru osisi vaịn, mmanya slag, akpu fọduru, sugar fọduru, biogas n'efu, aji fọduru, wdg
5. sludge: ime obodo mepere emepe, mmiri sludge, filter sludge, wdg.
Ngwunye mmepụta nke disk granulation dị elu, rụọ ọrụ nke ọma ma baa uru, akụrụngwa akụrụngwa bụ kọmpat, akpaaka dị elu, na ọrụ ahụ dị mfe, nke dị mfe maka imepụta ihe nke fatịlaịza organic.
1. A na-eji ihe ndị na-eguzogide corrosion na-eyi na-eguzogide ọgwụ na ngwongwo mmepụta niile. Enweghị ikuku ọkụ atọ, nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi. Ọ na-agba ọsọ nwayọọ nwayọọ ma dị mfe ilekọta.
2. Enwere ike ịgbanwe ikike mmepụta dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. The layout nke dum mmepụta akara bụ kọmpat, na nkà mmụta sayensị na ezi uche, na technology bụ elu.
Ngwongwo na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ihe nkwakọba ihe, ihe ntanetị (igwe), igwe na-emepụta ihe (granulator), igwe na-atụgharị ala (iche ngwaahịa ndị na-adịghị mma site na ngwaahịa ndị gwụchara) ejikọta usoro dị iche iche).
Mara: usoro mmepụta a bụ maka ntụnye naanị.
Usoro usoro nke disk granulation mmepụta akara nwere ike ịkekọrịta n'ime:
Jighi ngwa ngwa nwere ike hụ na fatịlaịza na-arụ ọrụ nke ọma. Akụrụngwa gụnyere nsị anụmanụ, mkpụrụ osisi rere ure, peel, inine, raw fatịlaịza, fatịlaịza n'oké osimiri, fatịlaịza ugbo, mkpofu atọ, microorganisms na ihe ndị ọzọ na-ekpofu ahịhịa.
Mpempe diski nke diski granulation na-agbaso usoro arc, bọọlụ na-akpụ bọl nwere ike iru karịa 93%. Mgbe ihe a na-abanye na efere granulation, site na ntụgharị na-aga n'ihu nke diski granulation na ngwaọrụ ịgba, ihe a na-ejikọta ọnụ iji mepụta ahụ nwere ụdị edo mara mma.
Nkwakọ ngwaahịa bụ usoro ikpeazụ nke usoro ntinye fatịlaịza organic. Emechara ngwaahịa a ejiri igwe akụrụngwa zuru ezu. Ọdịmma dị elu nke akpaaka na arụmọrụ dị elu ọ bụghị nanị na ọ na-enweta nha ziri ezi, kamakwa jupụta usoro ikpeazụ. Ndị ọrụ nwere ike ijikwa ọsọ ọsọ ma tọọ ntọala ọsọ dịka ihe achọrọ n'ezie.